Dai 1, 2022 by Martin6
Iyo Apple AirPods Max maehedhifoni makuru ane anoshamisa anoshanda ruzha-kudzima (ANC) uye yakanaka siginecha inonzwika, kunyangwe vaine zvimwe zvinogumbura zvinovacherekedza sezviri pachena chigadzirwa cheApple. Kana iwe watove muApple ecosystem, ida yako AirPods Pro, uye usanetseka nekushandisa mari yakawanda, iwe uchazvida izvi.
Mutengo wekutengesa: $ 479.00
$ 479.00 ku Amazon
Dhizaini inogadzika uye yakanakisa kuvaka mhandoInoshamisa ANC uye pachena modhiUpenyu hwebhatiri Bhotani nekorona yedhijitari zvakakuraYakanaka ruzha rwesimbaSimba rekubatanidza.
Kwete 3.5mm headphone jack, Mheni panzvimbo ye USB-CSme makiyi maficha haashande pa Android kana WindowsHapana aptX kana LDAC inotsigiraSmart kesi inotyisaMakrofoni inongonakaInodhura
Kubva Apple yakawana Beats muna 2014, zvave pachena kuti Apple inoda kuwana zvakawanda munzvimbo yevatengi yekuteerera. Iwo ekutanga AirPods aive akarova kunyangwe aityisa, asi iyo AirPods Pro iri pakati pe akanakisa echokwadi asina waya mahedhifoni unogona kuwana. Saka semuzvarirwo, takafara asi tisina chokwadi pakaziviswa iyo AirPods Max.
Ichi chingori chimwe chigadzirwa cheApple chakadhura, kana kuti vakanaka here?
Iyi Apple AirPods Max ongororo inobva kune nyanzvi dzekuteerera panzvimbo yedu yehanzvadzi SoundGuys. Buda kutora kwavo kwakadzama paApple AirPods Max.Apple AirPods Max$ 479.00 ku AmazonChengeta $ 70.00
Ndivanaani vari Apple AirPods Max avo?
Vanhu vari muApple ecosystem achada iyo AirPods Max.
Avo vanoda iyo AirPods Pro asi vanoda mbiri dzepamusoro-nzeve inonakidzwa neakawanda akafanana esoftware perks, asi mune yakagadzikana fomu chinhu.
Chero ani anoda zvinoshamisa ruzha-kubvisa vanofanirwa kufunga nezve AirPods Max, sezvo ivo vanokunda ese ari maviri Sony WH-1000XM4 uye Bose Noise Kudzima Mahedhifoni 700.
Chii chinonzi Apple AirPods Max?
Iyi AirPods Max ibhegi rakasanganiswa. Dzimwe nguva dzakanaka, asi kana iwe uchida kuzvishandisa nenzira isingatariswe neApple, zvinokatyamadza. Kunyangwe kungovashandisa iwo waya kunoda kusvetuka nepakati, asi zvakanyanya pane izvo gare gare.
Iyo AirPods Max ine yakasarudzika yekuvaka mhando asi kushaikwa kwekudzima switch uye flimsy kesi zvinokatyamadza.
Iwo AirPods Max ane huru-kudzima ruzha uye pachena modhi yekukutendera kuti unzwe nharaunda yako, iyo inobatsira kana iwe uri kunze kwekufamba kana kuda kugara uchiziva nezvekwaunogara. Vhoriyamu uye zvidzoreso zvekutamba zviri pakorona yedhijitari pamusoro pekapu yekurudyi nzeve, iyo yakaguma yave yakatsetseka zvekuti zviri nyore kusimudza netsaona kana kudzikisa vhoriyamu paunenge uchigadzirisa mahedhifoni. Masensa ari mukapu dzenzeve otomira kumbomira kutamba kana wabvisa mahedhifoni, uye otangazve kana adzoka.
Iko hakuna bhatani resimba rekudzima mahedhifoni, pachinzvimbo, inoenda mune yakaderera simba mode mukati mekesi. Iyo isinganzwisisike kesi (inoratidzwa pamusoro pechikamu ichi) yakanaka chete inoshanda senge yekudzima switch, nekuti isinganyatso chengetedza mahedhifoni kubva kune yakawanda. Kana iyo AirPods Max isipo, inoramba iripo kwemaawa mashoma isati yarara, ichidonhedza bhatiri mukuita.
Onawo: Akanakisa AirPods Max makesi
Hunhu hwekuvaka hwakanakisa, iine simbi isina simbi yemusoro uye aluminium makomi enzeve anonzwa akasimba, uye akapfava padding uye machira akareruka kutenderedza mukati mesimbi. Makapu nzeve anonzwa kugadzikana zvinoshamisa, uye padding inotsiviwa zvakare. Makapu enzeve akadzika, zvinoreva kuti kuparadzanisa ruzha kuri nyore kune vanhu vazhinji.
Iwo AirPods Max haadzivirirwe nemvura zvachose, saka kunyangwe aya achitakurika, zvinogona kuve nenjodzi kuvaburitsa kunze. Uku ndiko kupotsa pane chikamu cheApple.
Iwe unobatanidza sei kune yako Apple AirPods Max?
Iwo AirPods Max ane hukama hwakasimba (paApple zvishandiso), uye izvi zvinokonzerwa ne H1 chip. Mumwe waanoshanda naye ku SoundGuys yakashuma pano neapo glitches pakuteerera Spotify kubva ku iPhone SE (2020), uye podcast odhiyo isiri kuendeswa kune iyo AirPods Max kunyangwe yakabatana, asi iyo inoita senge inyaya yega.
Kufanana neAirPods Pro, idzi dzinoshandisa Bluetooth 5.0 neAAC uye SBC Makodhi eBluetooth. AAC yakanakira maPhones, asi kwete zvakanyanya kumafoni eAroid, sezvo mhando yekurira inogona kusiyanisa pakati pemidziyo inoshandisa AAC.
Iyo AirPods Max haina 3.5mm headphone jack, saka kana iwe uchida kushandisa chero chinhu kunze kweBluetooth mudziyo, unofanirwa kutenga $35 Mheni-kusvika-3.5mm yekuteerera tambo kubva kuApple. Kana mudziyo wako usina headphone jack (senge iPhone nyowani), iwe unozoda imwe $9 dongle.
Kubatanidza AirPods Max kumudziyo weIOS kuri nyore kwazvo, kubata mahedhifoni kureba kwemainji maviri kubva pachigadzirwa chako kuchaita kuti chiratidzo chekadhi ubatanidze mahedhifoni, uye wobva wabatana nemidziyo yese pane yako iCloud account.
Iwe unogona zvakare kubatanidza yako AirPods Max kune Android zvishandiso. Ingo bvisa mahedhifoni kubva mukesi, bata bhatani rekudzima-ruzha kumusoro kwekapu yekurudyi kwenzeve kudzamara iyo LED iri pazasi pekapu yenzeve ichibwaira chena, uye batanidza kune AirPods Max mumasetin'i eBluetooth emudziyo wako. Ingonyeverwa kuti unenge uchishaya akawanda maficha paunenge uchishandisa izvi nemidziyo yeAroid.
Chii chinonzi Apple Spatial Audio?
Spatial Audio ndeyeApple surround sound tekinoroji, uchishandisa gyroscopes uye accelerometers muhedhiseti neayo ari mu iPhone kana iPad yako. Izvi zvinocherekedza kuti ndeipi nzira yauri kufamba nemusoro kune mudziyo uye inogadzirisa ruzha zvinoenderana, saka iwe unowana inonyudza odhiyo chiitiko. Ichi chimiro hachishande pamidziyo yeAroid zvachose, iOS chete.
Bhatiri riri sei mu AirPods Max?
Apple inoti iyo AirPods Max ichagara iwe kwemaawa makumi maviri ekugara uchitamba uine inoshanda-kudzima ruzha. Paunenge uchiyedza mahedhifoni pamusoro pa SoundGuys, bhatiri rakagara pedyo nemaawa makumi maviri nerimwe pakubuda kwakafanana kwe21dB(SPL), uye kungopfuura maawa makumi maviri nerimwe chete neANC yakadzimwa. Hupenyu hwebhatiri uhwu hunenge huchigadzirisa chokwadi chekuti haugone kudzidzima, asi zvichiri kuipa kuti vanorasikirwa nebhatiri kana isiri kushandiswa, tichifunga kuti kazhinji kuchaja kwakaipa pakugara kwenguva refu kwebhatiri. Iwe haugone kutsiva nyore mabhatiri mu AirPods Max, saka vachengete zvakanaka.
Ko iko kuita ruzha-kudzimisa sei?
Sam Smart / Android Chiremera
Iyo inoshanda-kudzima ruzha paAirPods Max inoshamisa. Izvi zvakakosha, sezvo zvirinani zvaunogona kudzivirira ruzha rwekunze kuti risasvike munzeve dzako, zvirinani mahedhifoni ako anonzwika zvakanaka sezvaanogona.
Iyo AirPods Max ichadzima kuridza muridzo yeradiyeta, uye inonzwika semimhanzi kubva kune vaunogara uye kutaipa pane keyboard kwakanyarara zvakanyanya. Chinhu chinogumbura ndechekuti unogona chete kudzima ruzha-kudzima kana uine iOS mudziyo. Nekumisikidza, bhatani riri pamahedhifoni rinochinja pakati pekujeka modhi uye inoshanda-kudzima ruzha.
Buda: Headphone buying guide
Iyo AirPods Max inovhara ruzha zviri nani pane iyo Sony WH-1000XM4, inova mutambi wepamusoro mukudzima ruzha nechekare. Kuderedzwa kweruzha muWH-1000XM4 kunotsvedza kubva mubass renji pazasi peiyo 150Hz mamaki, uye iyo AirPods Max inobata yakatsiga.
Iyo AirPods Max zvakare inodarika iyo Bose Noise Kanzura Headphones 700, iyo inodonha zvishoma kana zvasvika kune ruzha pazasi 100Hz. Iyo AirPods Max inovharira imwe ruzha mune ino renji, iri chaizvo yakaderera-frequency ruzha rwaungade kunge rwakavharika. Tarisa uone kuenzanisa kwedu kwakadzama kwe AirPods Max uye Bose Mahedhifoni 700 zvimwe.
Iyo Apple AirPods Max inonzwika sei?
Iyo AirPods Max inonzwika yakanaka chaizvo, uye iine inonzwika inonzwika mbiri inokwezva vanhu vazhinji. The frequency mhinduro (cyan line) inonyatsoenderana ne SoundGuys target curve (pink line) kune iyo yakawanda chikamu, ine zvishoma yekukick munzvimbo ye-sub-bass. Pane kunyura kushoma pakati, asi mazwi achiri kujeka. Iyo yepamusoro frequency renji zvakare inonzwika yakanaka, uye pamwe haunganzwe kudiwa kwekukanganisa chero EQ marongero.
Iyo AirPods Max inonzwika yakanaka chaizvo, uye iine inonzwika inonzwika mbiri inokwezva vanhu vazhinji.
Iwe haugone kuwana yekusarasikirwa odhiyo neaya sezvo ari mahedhifoni eBluetooth, asi kushandisa Mheni dongle kuchakuswededza pedyo, kunyangwe iwe uchange uchishandura chiratidzo kubva kudhijitari kuenda kuanalog, kudzokera kudhijitari, uye pakupedzisira kuanalog zvakare, iyo. haina kunaka. Asi kana iwe uchiteerera pamusoro peBluetooth, hausi kuwana kurasikirwa kwekuteerera. Apple's AAC kuita kwakanaka, asi iwe uchiri kuteerera kune yakamanikidzwa siginecha paunoshandisa Bluetooth, saka inzwa wakasununguka kudonhedza yako odhiyo mhando marongero paunenge uchiridza mimhanzi kuchengetedza simba uye data.
Ko maikorofoni iri sei paApple AirPods Max?
Hunhu hwemaikorofoni paApple AirPods Max hunoenderana nekuti wakabatana nei mudziyo. Kurasika kwemhando yekurasika kwemaikorofoni kunonyanya kutsamira pamabatiro anoita mudziyo wako kutaurirana zvisina waya, uye hazviwanzo kujeka kuti ndezvipi zvishandiso zvinozvibata zvisina kunaka. Mhedzisiro yakanakisa inowanikwa pane mureza Android kana Apple mudziyo. Pazasi pane muenzaniso wemakrofoni mumamiriro akanaka.
Apple AirPods Max maikorofoni demo (Yakanaka):
Apple AirPods Max ongororo: Mutongo
Ungave kana kusashandisa mari inosvika madhora mazana mashanu nemakumi mana nemapfumbamwe pane maviri mahedhifoni ndiko kufona kwako. Nechinangwa, iyo AirPods Max inoshamisa maviri ehedhifoni, ane makuru maficha seauto-kumbomira uye pachena, zvinoshamisa-kudzima ruzha, uye yakakura kuvaka. Asi izvi zvinongoshanda chete kana wakazvipira kuApple ecosystem, uye kana usina chokwadi kuti izvi ndezvako, pamwe hazvisi. Pamusoro pezvo, kushaikwa kwewaya yekubatanidza kunoshungurudza, uye iyo diki yekutsvedza kesi iri kushomeka zvakanyanya. Kuti upindure mubvunzo wekutanga, hongu, iyo AirPods Max ndeye yakawedzera mutengo wemahedhifoni, asi iwo zvakare akakura.
Apple AirPods MaxGrade-A mahedhifoni anobvisa ruzha ane dhizaini yakakwenenzverwa.Apple's debut-cancelling headset inozunza H1 chip mumusoro wega wega, uye ine yakanyanya-mu-kirasi ANC. Iyi ine simba headset ndeyevatengi niche, uye inoshanda nemazvo mukati meApple ecosystem.$ 479.00 ku AmazonChengeta $ 70.00
Onawo: Yakanakisa AirPods Max accessories
Apple AirPods Max dzimwe nzira
Pamutengo wepaya imwe yeApple AirPods Max, unogona kuwana mamwe makuru anonzwika akavhurika-kumashure mahedhifoni anoita kuti chero audiophile aite godo. Iwe unogona zvakare kuwana iyo Sony WH-1000XM4 ($348) kana Bose Noise Inodzima Mahedhifoni 700 ($379) uye uchine mari yakawanda yekusara.
Kana iwe uchida yakanakisa ruzha-kudzima kutenderedza asi usingade kushandisa ruoko negumbo kune AirPods Max, iyo Bose Quietcomfort 45 ($329) zvinogona kukuitira zvakanaka. Vane nyaya dzavo, sekudaidzira kukuru, uye kusakwanisa kuteerera pasina ANC kana kubuda pachena, asi izvi zvinogona kunge zvisiri nyaya kune munhu akakodzera - uye Bose yakawedzera EQ basa kuapp yayo, saka unogona kushandura sei. mahedhifoni anonzwika. Vanoenzanisa zvakanaka vachipesana neAirPods Max uye Sony WH-1000XM4. Isu tinokurudzirawo makore-ezera Bose Quietcomfort 35 II ($249) yemutengo, ANC, uye chimiro chekurira.